Will I ulahlekelwe yonke idatha yami uma ngi jailbreak yami iPhone / iPad
Okokuqala ukwazi, ngeke ulahlekelwe noma iyiphi idatha kusuka jailbreaking on iPhone noma iPad. Jailbreaking ususa imikhawulo iOS ukuze uthole izimpande ukufinyelela ohlelweni ifayela iOS kanye nomphathi. Lokhu ngeke kukuvimbele kokubhekhapha noma ukuvumelanisa nge iTunes. Kodwa Jailbreaking kwanoma iyiphi izindlela njalo uyagijima ubungozi bokulahlekelwa idatha.
Indlela jialbreak iOS 7.1.x nge Pangu ku-Windows
Nendlela jailbreak iOS 7.1.x nge Pangu ku-Mac
Isibhakela wabo bonke, uthole ithuluzi iPhone alulame idatha. Absolutely Ungasebenzisa futhi iTunes ukubuyisela idatha yakho iPhone.
Step 1: Thwebula iPhone Data Recovery (Mac umsebenzisi chofoza lapha) futhi ufake. Yikuphi uhlelo eliqinisekile angakwazi scan amadivaysi akho bese alulame othintana wangaphambilini, SMS, Amanothi, izithombe, imiqophi and more.
Step 2: Uhlelo ngemuva ayifake, ukhethe imodi ngokuthi "Lokubuyisela from iTunes Backup ifayela". Futhi ke uzobona uhlu lwabo bonke iTunes amafayela akho isipele, khetha ifayela yakamuva ubuye uchofoze "Qala Scan".
Step 3: Ngemuva scan, ungakwazi kuqala konke okuqukethwe odlule kule fayela iTunes isipele, khetha lezo ufuna bese uchofoze "Phinda". Ubhekene nokubuyisela bonke manje.
Ngakho-ke, kufanele njalo yokusekelayo jailbreak ngaphambi. It kuphela Kuthatha wena imizuzu embalwa, kodwa kuyokwenza iqhaza elibaluleke kakhulu ekuphileni kwakho.
Posted on July 5, 2014 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba iOS Data RecoveryAmathegi iPhone, Jailbreak, alulame idatha iphone
Langaphambilini post Previous: Idlalwa kanjani MKV Amafayela on Xbox 360
Next post Next: Nendlela Jailbreak iOS 7.1.x ne Pangu 1.1 on Windows